Makuva emabhuku akakanganwa: hunyanzvi hwaZafon | Zvazvino Zvinyorwa
Makuva emabhuku akakanganwa
John Ortiz | | Mabhuku, Literature, Novela
Makuva emabhuku akakanganwa Iyo tetralogy yakanyorwa naCarlos Ruiz Zafón anobva kuBarcelona. Aya akateedzana inyanzvi yemunyori, iyo yakazova yekushamisa chiitiko mune XNUMXst century Spanish mabhuku. Munyori akagadzira ina dzakarongeka-dzakasununguka uye nyaya dzinozvimiririra, imwe neimwe iine hunhu hwayo, asi pakupedzisira yakabatana kune imwe neimwe.
Iwo marongero anodarika nepazvakavanzika zvakasiyana zvinotenderedza zvizvarwa zvitatu zvemhuri yekwaSempere nechitoro chemabhuku. Pamusoro pe, kuvandudzwa kwenoverengeka yega yega kunosanganisira bhuku rakaomarara rinoisa nhanho yenyaya yacho. Zvese zvinowedzeredzwa nemavara asingakanganwiki ayo anowedzera iyo labyrinth yenhema uye kufungira kwakagadzirwa nemunyori.
1 Tetralogy Makuva emabhuku akakanganwa
1.1 Mumvuri weMhepo (2001)
1.2 Mutambo weNgirozi (2008)
1.3 Musungwa weDenga (2011)
1.4 Labyrinth yeMweya (2016)
Tetralogy Makuva emabhuku akakanganwa
Uye 2001, Ruiz Zafón akatanga nhepfenyuro iyi yekufungidzira zvinyorwa, zvine mashiripiti zvakatanga nekubudirira kuendesa kwe Mumvuri wemhepo. Bhuku rakabva rakunda mamirioni evaverengi, kutanga chiitiko chinozivikanwa se: "zafonmanía". Muchikamu chekutanga ichi, protagonist nababa vake vanovhura mikova kunzvimbo isinganzwisisike uye isinganzwisisike: kumakuva emabhuku akakanganwa.
Zvino muna2008 munyori akapa Mutambo wengirozi, iro basa rakatyora rekodhi mune presale yayo muSpain, ine anopfuura mamirioni imwe emakopi. Makore matatu gare gare, Musungwa weKudenga (2011) akapinda muunganidzwa. Mu 2016 chitsauko chekupedzisira chaizosvika na Labyrinth yemweya. Mune ino novel yazvino, zvidimbu zvese zvepikicha izvo zvakanyorwa nemunyori paakagadzira saga zvinowirirana.
Tetralogy Nyaya La ...
Mumvuri wemhepo (2001)
Icho chinhu chakavanzika chegothic uye yekufungidzira, nemunyori waanovhura iwo akatanhamara akateedzana. Iyo nyaya inoitika muguta reBarcelona kubva mugore ra1945, uye protagonist wayo mukuru ndiDaniel Sempere. Hupenyu hwemurume wechidiki uyu hunoshandurwa apo, nekuda kwababa vake, iye anoziva Kumakuva eMabhuku Akakanganikwa uye afunga kusarudza iwo mavara Mumvuri wemheponaJulián Carax.
Kutorwa nenyaya - uye kuda kuverenga zvimwe zveCarax -, Daniel anotanga kuferefetwa uko shamwari yake nyowani Fermín ajoina. Kutsvaga kunovatungamira munzira dzisina kufungidzirwa, uye pavanofambira mberi vanowana data rinonakidza kubva kumunyori. Pakati peizvi, chiitiko chine rima naPenelope Aldaya chinomira, izvo zvakakonzera kuti murume uyu ave munhu akasviba uye akasurukirwa.
Sezvatinoenderera mberi nemibvunzo, hupenyu hwevechidiki hunotanga kuve panjodzi. Asi, hapana chinomisa hunhu hwaDanieri akashinga neshamwari yake yakatendeka, uyo havazorore kudzamara vajekesa zvese zvakavanzika zvakakomberedza Julián. Saka inopfuura zano rakakomberedzwa neicho chaicho uye fungidziro, ine musanganiswa weins uye kubuda, kuuraya, kurambidzwa kudanana uye kushamwaridzana.
Mumvuri wemhepo ...
Mutambo wengirozi (2008)
Icho chirevo inotyisa novel inoitika muBarcelona ye20s. Iyo nyaya inonakidza ine protagonist yayo semunyori David Martín. Mune mukana uno, Ruiz Zafón akagadzira zano rakasiyana kubva mubhuku rekutanga, asi iine dense uye yakanyatsorongedzwa nhoroondo izvo zvinoita kuti muverengi anyudzwa mune zvemashiripiti uye kufungidzira.
Zano racho rinoitika naDavid vachirangarira hupenyu hwake hunosuruvarisa, achirangarira kubudirira kwebasa rake Guta reVakatukwa, iyo yaakaburitsa mupepanhau rine mukurumbira reBarcelona. Iye protagonist anorondedzera maitiro ekuzadzikiswa uku, anotamira kuimba yakasiyiwa uye sangana naCristina (kuda kwake). Munzvimbo iyi nyowani, akanyora zvimwe zvinyorwa- kusanganisira bhuku rake-, akafunga kunongedza hupenyu hwake uye akaita sarudzo yekuroora musikana akanaka uyu.
Zvisinei,, nekuda kwekuodzwa mwoyo kwakasiyana siyana, hapana chinoenda sekuronga. Pakati pezvakaodza moyo, iyo ye Cristinauyo ane mumwe munhu. Uyewo, bhuku rake idzva iri fiasco, yKuwedzera kutuka kune kukuvara, anodzidza izvozvo kuva nechinetso chakakomba cheutano.
Munguva yekuora mwoyo kwako, David akafonerwa naAndreas Corelli, hunhu hunoshamisa chii chinokupa iwe mari hombe ye mari nekuporeswa kwayo kuchinjana nyora bhuku pane dzidziso nyowani yechitendero. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, chiitiko chikuru chinotyisa chinokanganisa hupenyu hwemunyori.
Pakati pezvakaipa zvitsva, Martín anotanga kuongorora, sezvo achifungidzira kuti zvakaipa zvese zvine chekuita nekutumwa kwemavara erima. Vanhu vakati wandei vachapindira munzira iyi, senge mutengesi wemabhuku Sempere nemubatsiri wake anonzwisisa, Isabella. Chiitiko chese chinotungamira David kubhuku Lux Aterna, yakanyorwa nemuridzi wemba yekare yaanogara, VaMarlasca.
Mutumwa Mutumwa / Iyo ...
Musungwa weKudenga (2011)
Iyo rondedzero izere nekufungidzira uye kusagadzikana, umo vatambi vakakurumbira venyaya vanodzokera kumberi, vakadai sa: Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres, David Martín naIsabella Gispert. Pamusoro pe, munyori anoburitsa pachena zvimwe zvisingazivikanwe izvo zvakambosiya vaverengi vasina chokwadi.
Makore akati wandei apfuura, Danieri akaumba a mhuri nemukadzi wake Bea uye mudiki Julian. Pari zvino, anoshanda pamwe nababa vake uye shamwari yake Fermin (hunhu hukuru zano) muchitoro chemabhuku chemhuri: Sempere nevana. Iyo nzvimbo haina kunyanyisa, nekudaro, Daniel anofara kana mutengi achifarira kwazvo bhuku rinodhura rinowoneka: Kuverenga kweMonte Cristo.
Zvisinei, mufaro wacho unobva wasanduka kusagadzikana, sezvo murume anotadza anotora bhuku ndokuisa chinyorwa: "Kuna Fermín Romero de Torres, uyo akadzoka kubva kuvakafa uye ane kiyi kune ramangwana." Pakangobuda mueni, Daniel anoenda neshamwari yake kunomuudza zvakaitika. Pamusana, Fermín anovaudza nezve ake apfuura uye anoburitsa chakavanzika chinotyisa.
Panguva iyoyo, nyaya yacho inofamba makore kumashure, apo Fermín Era musungwa munhare yemauto yeMontjüic y kusangana naDavid Martín. Munzvimbo iyoyo ndiMauricio Valls - director wejeri uye munyori ane hushamwari-, uyo anotyisidzira Martín uye anoshandisa hunyanzvi hwake. Kubva ipapo hushamwari pakati paFermín naDavid hwakazvarwa, uye wekupedzisira anomupa basa rakakosha rinosanganisira Daniel Sempere.
Musungwa weDenga ...
Labyrinth yemweya (2016)
Iko kuendesa kunovhara iyo kutenderera kwemanonyorwa ayo anotenderedza zvakasikwa zve Makuva emabhuku akakanganwa. Panyaya iyi, Ruiz Zafón akati: “… iyi yekupedzisira ndiyo yandinoda, pamwe inyaya yekuti chidimbu chejira, iyo inowedzera zvese zvinhu zvakasimudzwa mune zvakapfuura izvi ”. Uye, zvirokwazvo, ndiro rakarebesa uye rakazara kwazvo bhuku mune yese saga, iine mapeji 900 mune ese.
Alice Grey mukadzi ane makore makumi maviri anoyeuka nostalgically hudiki hwake, uye sei akapona kurwiswa kunotyisa kwe Hondo yevagari veSpanish. Ndi 1958, uye uyu mukadzi wechidiki akashinga anoda kusiya basa pabasa rake, mushure memakore gumi ekuva mupurisa wemapurisa epachivande eMadrid. Asi pamberi zvinofanira ita basa rekupedzisira: bvunza pakutsakatika kweMauricio Valls, gurukota rehurumende yeFranco.
Alicia ano tsvaga pamwe naKaputeni Vargas, waanoshanda naye. Kana vachitarisa hofisi yevakanyangarika, vanowana bhuku rakanyorwa naVíctor Mataix. Nenguva isipi, vanozvibatanidza nenguva iyo maValls akatungamira Montjüic - nzvimbo iyo vamwe vanyori, kusanganisira munyori iyeye, vakasungwa. Vamiririri vanotevera nzira yeiyi nzira uye vanoenda kuBarcelona kunotsvaga vatengesi vazhinji vebhuku, pakati pavo pana Juan Sempere.
Sezvo Alicia anofambira mberi mukuferefeta, iye anowana tangle yemanyepo, kubiwa uye mhosva. by yehutongi hwaFranco. Mushure mekupinda muhomwe iyoyo yehuori, vanova panjodzi huru, asi vanokwanisa kupukunyuka vasina kukuvara. Zvese nekuda kwekuti Alicia aive nerutsigiro rwevanhu vakakosha, pakati pawo Daniel naFermín vakatanhamara. Mudiki Julian Sempere akaitawo basa rakakosha, muchokwadi, anopedzisira ave kiyi mune mhedzisiro yenyaya.
Iyo Labyrinth ye ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Makuva emabhuku akakanganwa
Iyo Cathedral yeGungwa Bhuku
Vladimir Mayakovski. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Nhetembo